European Style Obere ara ara 157cm TPE Mmekọahụ Doll Simona
Nwa bebi TPE,Stylekpụrụ bebi ndị Europe,Nnukwu ara mmekọahụ mmekọahụ,B iko ụmụ bebi mmekọahụ,Ebughibu na umu nwanyi,Lshụnanya
157CM Nwa akwukwo mara mma B iko ara TPE Sex Doll Simona
Save 26%$ 1,451.00$ 1,958.02
Simona bụ nwa akwụkwọ mahadum afọ mbụ. O nwere ntutu na-acha odo odo ogologo ntutu ogologo, anya ojii na agụụ mmekọahụ, egbugbere ọnụ ooh. Enwere ike ihu ya n’ime ugegbe elere n’isi ya na ọ ma ihe mmuta. Ọ dị mma na mgbakọ na mwepụ na physics, ma nwee oge iji gbakọọ ike nke ịba ụba ọnụọgụ atọ, na ọnụọgụ nka na-enweghị afọ ojuju. Nrọ nke ọdịnihu bụ onye na-eme achịcha ụlọ ma ọ bụ barista ma ọ bụ onye ọka iwu.
Omume ya na-enwe obi ụtọ karịa, ma ọ bụ obere nsogbu na-adịghị akpachapụ anya. Ọ na-amasị ya ka ndị ọzọ na-akpọ ya nwanne. Mgbe ọ nụrụ okwu a "nwanne", ọbụlagodi na ọ na-arahụ ụra nke na elekere mkpuchi adịghị eteta, ọ ga-arịgo ozugbo. N’ihi na obodo ya bụ ebe a na-eme bred, ịnụ ọkụ n’obi maka ịme achịcha siri ike karịa onye ọ bụla ọzọ, tinyekwa ya na achịcha. Ma na achicha, adighi m mma iri nri ndi ozo, ma mgbe m na-eme ofe miso, nne m na-egbochi onwe ya.
Anyị nwere nnukwu nhọrọ nke nhọrọ ịhụnanya nwa bebi nke nha na uzo di iche iche.
Simona's packing list:
FREE 1 IRLỌ ISIOKWU Anya
FREE 1 PAIRS nke GHLNANYA
Elu ： 61.8 sentimita (157cm)
Ibu ibu ： 63.9 lbs (29kg)
Bust ： 26.8 sentimita (68cm)
N'úkwù ： 18.5 sentimita (47cm)
N'úkwù ： 30.3 sentimita (77cm)
Ogwe aka: 19.7 sentimita （50cm）
Lengthkwụ ogologo: 8.7 sentimita （22cm）
Ichikota 57.1*16.6*11.9 inches(145*42*30cm)